Maamulka Jubbaland oo digniin u diray dadka taga deegaannada Al-shabaab - Halbeeg News
BAARDHEERE(HALBEEG)-Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Kaliil oo shirjaraa’iid ku qabtay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii tagta deegannada ay ka taliyaan Al shabaab.
Maxamed Cabdi Kaliil ayaa tilmaamay in maanta wixii ka dambeeya odiyaasha iyo dadka deegaanka aysan tagi karin deegannada Al shabaab joogan, ciddii tagna tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono.
“Waxaan ku amreyna, odiyaasha deegaanka inaysan shir u tagi karin deegannada ay joogan Al shabaab, ciddi tagta kuma soo noqon karto deegannada maamulka Jubbaland”ayuu yiri wasiiru dowlaha amniga Jubbaland.
Wasiiru dowlaha amniga Jubbaland ayaa dhanka kale sheegay in gacanta lagu dhigay labo nin oo sida u sheegay Al shabaab u qaabilsanaa dilalka iyo qaraxyada degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
“Waxaan ku guuleysanay inaan gacanta ku dhigno labo nin oo ka tirsanaa Al shabaab, una qaabilsanaa madax jabiska iyo qaraxyada, waa qirteen inay falalkan ka fuliyeen degmada Baardheere, waxaa la horkeeni doonaan sharciga”ayuu yiri wasiiru dowlaha amniga.
Maamulka Jubbaland ayaa horey deegannada uu maamulo uga masaafuriyay xaasaska rag ka mid ah Al shabaab kadib markii maamulka uu amar ka soo saaray.